Iindlela ezi-5 zokuQhuba ukuBuyela ngakumbi kwiZikolo zokuThengisa ngo-2019 | Martech Zone
Iindlela ezi-5 zokuQhuba ukuBuyela ngakumbi kwiNtengiso yeSikolo ngo-2019
NgoMvulo, Agasti 5, 2019 NgoMvulo, Agasti 5, 2019 Douglas Karr
Ukubuyela-esikolweni lixesha lesibini elikhulu lokuthenga lonyaka kwaye ilizwe ledijithali libeyinxalenye yendlela yokuthenga yomthengi.
Ukubuyela kwinkcitho yesikolo
Lo nyaka, i I-NRF iqikelela ukubuyela ekholejini ukuchitha wedwa kuya kwenza iakhawunti ngokumangalisayo i-54.5 yezigidigidi zeedola.
Kunye nenkcitho ye-k-12, ukubuyela esikolweni ukuya kufikelela kwi-80.7 yezigidigidi, ezantsi ukusuka kwi-82.8 yezigidigidi zeedola kunyaka ophelileyo.
Kwi-2018, iipesenti ezingama-23 zenkcitho yokubuyela esikolweni ziye zenzeka kwi-Intanethi. Kulo nyaka, Iipesenti ezingama-29 zokuthenga ukuya esikolweni ziya kuba kwi-Intanethi.
Ngo-2018, abathengi be-k-12 ababuyela esikolweni bachitha i-avareji ye- $ 685 kwikhaya ngalinye kwizinto ezinxulumene nesikolo… lindela loo mali ukwanda ukuya kwi- $ 696.70 yenkcitho yesikolo kwikhaya ngalinye.
Inkcitho yokubuyela ekholejini yongeze enye i-280 yeedola kwikhaya lilonke $ 976.78 $ kwinkcitho enxulumene nekholeji kwikhaya ngalinye.
NgokukaDeloitte, Iipesenti ezingama-57 ze-k-12 zenkcitho yokubuyela esikolweni bezigcinwe kwi-intanethi kunyaka ophelileyo. Kulo nyaka, inani liphantse lilingane, kwiipesenti ezingama-56.
Ngelixa ooMama besithenga ngakumbi, abazali are Ukuchitha ngaphezulu kweedola ezili-115 ngaphezulu ekuthengeni esikolweni.
Le infographic evela kwiishelufa, Zonke iZibalo oziDinga ukuLwela iPhulo lakho lokuBuyela eSikolweni, ityhila amaqhinga ama-5 abanokuthi abathengisi bawaxhamle kwintengiso ebuyela esikolweni:
Abazali abacinezelwe ixesha bathembele kwintlalo nakwiselfowuni ekuthengeni izigqibo, ke qiniseka njalo zenzele kunye neshedyuli ezinye izibonelelo ezinkulu.
Cinga ngokuqhuba a Iziqalo ezintsha iphulo lokufaka kwiimvakalelo zabazali malunga nabantwana babo ukuqala kwisikolo esitsha okanye kwikholeji.
Buza abameli bebrand kunye nabashukumisayo ukudibanisa iimveliso zakho kwisithuba esele sisebenza kuso.
Iqabane kunye Umama weBlogger ukukunceda ufike phambi kwabathengi kunye nokubonelela ngomxholo owenziwe ngumsebenzisi.
Abazali abane abantwana abaninzi ujonge ngakumbi iindlela zokonga, ngoko ke dibanisa iimveliso zakho kunye neqela leethagethi zakho kwiiphakheji ezifikelelekayo.
Nantsi i-infographic epheleleyo enedatha entsha emangalisayo yabathengisi be-2019 kunye neenkampani ze-e-commerce:
tags: 2019ukubuyela ekholejiniBuyela esikolweniukubuyela evenkileni yesikolointengiso ebuyela esikolweniukubuyela esikolweni ukuthengisaInkcitho yokubuyela esikolwenikhomba ngaphakathi